Abiy Axmed oo safarkii ugu horeeyay ku tagey Qatar
DOHA - Ra'iisul Wasaaraha dalka Eithiopia, Abiy Axmed iyo wafdi uu hogaaminayo, ayaa maanta oo Talaado ah ka degay magaaladda Doha, ee caasimadda Qatar halkaasi oo uga billaabatey booqasho rasmi ah.
Abiy Axmed iyo mas'uuliyiinta kale ee la socota ayaa waxaa Garoonkd ku dhaweeyay Wasiirka Isgaarsiinta Qatar Jassim bin Saif Al Sulaiti, waxaana loo galbiyay Madaxtooyadda oo wadahadallo kula leeyihiin madaxda sare ee dalkaasi.
Wafdiga Abiy ayaa lagu wadaa in Amiirka Qatar Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani kawada hadlaan xoojinta xiriirka labada dal iyo arrimo kale oo maalgashiga iyo ganacsiga ku saabsan.
Waa booqashii ugu horeysay oo Abiy Axmed ku tago Qatar tan iyo markii uu xafiiska la wareegay March 2018, isagoo sameeyay isbedello gudaha dalkiisa iyo heshiisyo uu la galay dalalka deriska, taasoo sare u qaatey maqaamka Eithiopia ee gobolka.
Wararka ayaa sheegay in ujeedka booqashad Abiy Axmed ee Doha ayaa salka ku hayso inuu dowladda Qatar iyo Ganacsatada kala hadlo sidii maalgashi dalkiisa ugu sameyn lahaayeen, sidoo kalena ugu qal-qaalin lahaayeen maalgashi caalami ah.
Dabeysha Isbedallada ee ka socota Eithiopia ayaa dheera-geliyay dalal badan oo kuwa Khaliijka u badan inay maalgashi ku sameystaan dalka qaniga ku ah wax soosaarka Bunka sidoo kalena qorsheynaya inuu dhawaan markii ugu horeeyay soo saaro shidaal.
Qatar ayaa xoojisay xiriirkeeda Addis Ababa mudooyinkii dambe iyadoo Amir Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani uu April 2017 booqasho ku tagey dalka Eithiopia.
Farmaajo oo Safar Deg Deg ah ugu ambabaxay Itoobiya [DAAWO]
War Saxaafaded 21.06.2018. 10:30
Safarkan ayaa yimid xilli Farmaajo uu cambaareyn culus kala kulmay Heshiiskii dhawaan uu...
Maxaa ka jira in Ethiopia iyo Soomaaliya laga dhigayo hal Wadan?
Soomaliya 18.06.2018. 09:38
Abiy Axmed oo dhimaya tirada Gollaha Wasiiradda Ethiopia
Afrika 11.10.2018. 14:24
Cabdi Illey oo lagu khasbay inuu xiro Xabsiga Jeel Ogaadeen
Soomaliya 12.07.2018. 09:29